Einstein: Ahoana no ahafahan'ny vahaolana an'ny Salesforce mitarika fivarotana varotra sy fivarotana | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 13, 2020 Alatsinainy Aprily 13, 2020 Douglas Karr
Ireo sampan-draharaha ara-barotra dia matetika tsy dia misy mpiasa loatra sy be loatra ny asa - mampifandanja ny fotoana amin'ny fivezivezena ny angon-drakitra misy eo amin'ny rafitra, mamantatra ny fotoana mety, ary manaparitaka votoaty sy fampielezan-kevitra hampitomboana ny fahatsiarovan-tena, ny firotsahana, ny fahazoana ary ny fitazonana. Indraindray anefa, hitako ireo orinasa sahirana hanaraka rehefa misy vahaolana tena izy any izay hampihena ny loharano ilaina hampitomboana ny fahombiazany amin'ny ankapobeny.
Iray amin'ireo teknolojia ireo ny faharanitan-tsaina - ary efa manaporofo izany fa manome lanja ny mpivarotra rehefa miresaka isika. Ny tsirairay amin'ireo rafitra marketing lehibe dia samy manana ny motera AI. Miaraka amin'ny fanapahan'ny Salesforce eo amin'ny sehatry ny indostria, ny mpanjifa Salesforce sy Marketing Cloud dia mila mijery Einstein, Sehatra AI an'ny Salesforce. Na dia maro aza ny motera AI mitaky fivoarana betsaka, ny Salesforce Einstein dia novolavolaina mba hampiasaina amin'ny programa kely sy fampidirana kely mandritra ny fivarotana Salesforce sy ny marketing… na B2C na B2B.
Antony iray lehibe mahatonga ny AI ho lasa malaza amin'ny varotra sy ny varotra satria, raha ampitaina tsara dia esorina ny fitongilanana ao anaty ireo ekipa marketing. Ireo mpivarotra dia mazàna manampahaizana manokana ary mandroso amin'ny làlana ahazoany aina indrindra raha ny paikadin'ny marika, ny fifandraisana ary ny famonoana no atao. Matetika izahay dia manangona ny angon-drakitra hanohanana ilay toerana itokisantsika indrindra.
Ny fampanantenan'i AI dia ny manome hevitra tsy miangatra, mifototra amin'ny zava-misy, ary iray izay manohy mivoatra rehefa mandeha ny fotoana rehefa ampidirina ny angona vaovao. Na dia matoky ny tsinaiko aza aho dia gaga foana amin'ny zavatra vokarin'i AI! Farany, mino aho fa manafaka ny fotoanako ity, ahafahako mifantoka amin'ny vahaolana famoronana miaraka amin'ny tombotsoan'ny data sy ny fikarohana kendrena.
Inona ny Salesforce Einstein?
Einstein dia afaka manampy ny orinasa handray fanapahan-kevitra haingana kokoa, hahatonga ny mpiasa hamokatra bebe kokoa ary hampifaly ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny intelligence intolo (AI) manerana ny Salesforce Customer 360 Platform. Ny interface mpampiasa dia mitaky fandaharana kely indrindra ary mampiasa ny fianarana milina mba haka angon-tantara ara-tantara haminavina na hanatsara ny ezaka amin'ny varotra sy ny varotra amin'ny ho avy.
Misy fomba maro azo ampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy, ireto ny tombony lehibe sy ny mampiavaka ny Salesforce Einstein:
Salesforce Einstein: Fianarana milina
Mahazoa vinavina bebe kokoa momba ny orinasanao sy ny mpanjifanao.
Einstein Discovery - Ampitomboy ny famokarana ary zahao ireo lamina mifandraika amin'ny datao rehetra, na any Salesforce izy io na any ivelany. Mitadiava fomba fijery AI tsotra sy tolo-kevitra momba ny olana sarotra. Avy eo, mandraisa andraikitra amin'ny zavatra hitanao fa aza miala amin'ny Salesforce.
Einstein Prediction Builder - Vinavina ny valin'ny asa aman-draharaha, toy ny soatoavina na soatoavina mandritra ny androm-piainana. Mamorona modely AI fanao amin'ny saha Salesforce na zavatra misy tsindry fa tsy kaody.
Hetsika farany tsara farany nataon'i Einstein - Manolora tolo-kevitra voaporofo ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa, eo amin'ny fampiharana azy ireo. Farito ny tolo-kevitra, mamorona paikady hetsika, manangana maodely azo vinavinaina, manolotra tolo-kevitra ary mampihetsika ny mandeha ho azy.
Salesforce Einstein: Fanodinana ny fiteny voajanahary
Ampiasao ny NLP hahitanao lamina fiteny azonao ampiasaina mba hamaliana fanontaniana, hamaly ny fangatahana ary hamantarana ny resaka momba ny marikao manerana ny tranonkala.
Fiteny Einstein - Fantaro ny zavatra tsapan'ny mpanjifa, mandeha amin'ny lalana ny fanontaniany, ary mandrindra ny fizotran'ny asa-nao. Manamboara fanodinana fiteny voajanahary ao amin'ireo fampiharana anao mba hanasokajiana ny dikany sy ny fahatsapana ao anaty lahatsoratra iray, na inona na inona fiteny.
Einstein Bots - Manamboara, mampiofana, ary manaparitaka botsika mora foana amin'ny fantsona nomerika izay mifandray amin'ny angona CRM anao. Hatsarao ny fizotry ny asa aman-draharaha, omeo hery ny mpiasanao ary ampifalio ny mpanjifanao.
Salesforce Einstein: Vina amin'ny solosaina
Ny fahitana amin'ny solosaina dia misy ny famantarana ny mason-tsary sy ny fanodinana data mba hanarahana ny vokatrao sy ny marikao, hahafantatra ny sary amin'ny sary, sy maro hafa.
Fahitana an'i Einstein - Jereo ny resaka iray manontolo momba ny marikao amin'ny media sosialy sy ny sisa. Mampiasà famantaran-tsary manan-tsaina amin'ny fampiharana ataonao amin'ny alàlan'ny fampiofanana maodelim-pianarana lalina hahafantarana ny marikao, ny vokatrao sy ny maro hafa.
Salesforce Einstein: fanekena fitenenana mandeha ho azy
Ny fanekena kabary mandeha ho azy dia mandika ny fiteny tenenina ho lasa lahatsoratra. Ary i Einstein dia mandray dingana lavitra kokoa, amin'ny alàlan'ny fametrahana an'io lahatsoratra io ao anatin'ny sehatry ny orinasanao.
Feon'i Einstein - Makà fampahalalana isan'andro, manavao fanavaozana, ary atosoy ny dashboard amin'ny firesahana tsotra fotsiny amin'ny Einstein Voice Assistant. Ary, mamorona sy mandefa ireo mpanampy am-peo miaraka amina Einstein Voice Bots anao.
Tsidiho ny tranokalan'ny Salesinstce Einstein raha mila fampahalalana fanampiny momba ny vokatra, ny faharanitan-tsaina artifisialy, ny fikarohana AI, ny fampiasana tranga ary ny fanontaniana napetraka matetika.
Aza hadino ny mifandray amin'ny Firafitry ny consultants sy ny fampiharana Salesforce, Highbridge, ary afaka manampy anao izahay amin'ny fanaparitahana sy fampidirana ny iray amin'ireo paikady ireo.
Tags: fahaizana artifisialyfahitana computerEinsteineinstein nlpfahitana einsteinfeo einsteinfamakafakana saryNy fanodinana fiteny voajanaharysalesforceSalesforce Einsteinvarotra einstein mpivarotrafaminaniana momba ny varotrainona ny atao hoe einstein
Squarespace: nanangana tranokala Spa miaraka amina fivarotana an-tserasera sy fametrahana fanendrena ao anatin'ny iray andro aho